Ngubani okuncedayo kwimeko yomthetho wolwaphulo-mthetho? | Law & More BV
Zininzi iimeko apho umthetho wolwaphulo mthetho udlala indima ebomini bethu. Kungenxa yoko le nto sihlala sidibana nayo ngengozi. Umzekelo, unokucinga ngemeko apho wawusele khona isiselo esinye kakhulu kwaye ugqiba ukuqhuba. Ukuba ubanjwa emva kokutshekelwa ngotywala unengxaki. Kwimeko apho unokuhlawuliswa okanye ufumane isamani.
KUFUNEKA KUFUNA UMLUNGU WOKUGQIBELA?
Zininzi iimeko apho umthetho wolwaphulo mthetho udlala indima ebomini bethu. Kungenxa yoko le nto sihlala sidibana nayo ngengozi. Umzekelo, unokucinga ngemeko apho wawusele khona isiselo esinye kakhulu kwaye ugqiba ukuqhuba. Ukuba ubanjwa emva kokutshekelwa ngotywala unengxaki. Kwimeko apho unokuhlawuliswa okanye ufumane isamani. Enye imeko eqhelekileyo kukuba ngenxa yokungazi okanye ukungakhathali, iingxowa zabagibeli zinemibhalo engavumelekanga ethathwa kwiiholide, iimpahla okanye iimali eziboniswe ngokungachanekanga. Nokuba kungasiphi na isizathu, iziphumo zezi zenzo zinokuba zibi, kwaye isohlwayo solwaphulo-mthetho sinokunyuka size isixa se-EUR 8,200.
> Ixhoba lomthetho wolwaphulo-mthetho
> Umthetho wezolwaphulo-mthetho
> Umthetho oManyeneyo woLwaphulo-mthetho
Njengosomashishini okanye umlawuli wenkampani unokuhlangana nomthetho wolwaphulo-mthetho ngenxa yesikhundla sakho seshishini. Oku kunokuba njalo, emva kokuqinisekiswa ngabasemagunyeni abanobuchule, inkampani yakho ikrokrelwa ngobuqhetseba okanye ukurhweba okungaqhelekanga. Kananjalo, ukuthatha inxaxheba kwilizwe lishishini kunokukhokelela ekwaphuleni kuqoqosho okanye kukwaphula umthetho wendalo onokuthi usebenze kwishishini lakho. Izenzo ezinjalo zinokuba neziphumo ezibi kwinkampani yakho kwaye zikhokelela kwizohlwayo eziphezulu kakhulu. Ngaba uzifumana ukolu hlobo lwemeko okanye ufuna ulwazi olungakumbi? Nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nabameli betyala lika Law & More.
Ingcali yegqwetha lezomthetho Law & More
Utyholwa ngokuqhuba uphantsi kweempembelelo zotywala okanye iziyobisi? Cela uncedo lwethu lwezomthetho.
Utyholwa ngobuqhetseba? Singacebisa
Umthetho wobumbano wolwaphulo-mthetho
Ngaba uzibeka emngciphekweni wemicimbi yolwaphulo-mthetho? Singakunceda
Ukhe wahlaselwa? Qala inkqubo yezomthetho
yenze yahlawulelwa ndim
inkampani encinci. Ndiza ngamandla
cebisa Law & More
kuyo nayiphi na inkampani ephakathi
Ixhoba lomthetho wolwaphulo-mthetho
Kuyenzeka ukuba ujongane nomthetho wolwaphulo-mthetho ngokwembono yexhoba. Ezi ntsuku senza ukuthenga okungaphezulu kwi-intanethi. Ngokwesiqhelo konke kuhamba kakuhle kwaye ufumane oko uku-odeyo. Ngelishwa, ngamanye amaxesha kuya kungalunganga: uhlawule imali eninzi ngezinto ezithile ezinje ngomnxeba okanye ilaptop, kodwa umthengisi akakaze azise iimpahla kwaye akazimiselanga ukwenza njalo. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba ufuna ukwazisa ukuba iphi na impahla yakho, umthengisi akukho ndawo ifumanekayo. Kwimeko apho unokuba lixhoba lobugebenga.
Kwiimeko apho udibana nomthetho wolwaphulo-mthetho ngengozi, kuyacetyiswa ukuba unxibelelane negqwetha elichaphazelekayo Law & More. Wonke umcimbi okwimeko yomthetho wolwaphulo-mthetho unganobungqwabalala kwaye iintshukumo kwiinkqubo zolwaphulo-mthetho zinokulandela ngokukhawuleza. Ku- Law & More Siyaqonda ukuba izenzo zomthetho wolwaphulo-mthetho zinokuba nefuthe elikhulu kubomi bakho kwaye yiyo loo nto sigxile ekusombululeni ingxaki yomthengi ngokukhawuleza nangempumelelo. Amagqwetha olwaphulo mthetho ku Law & More Kuyonwabele ukukunikezela ngenkxaso yezomthetho kwezi ndawo:
Njengomqhubi wesithuthi kufuneka ugcinwe kwihambo eyingozi. Ukuziphatha okunjalo kuhlala kunjalo xa kuselwa isiselo esinxilisayo. Abantu bahlala bangena emva kwevili lemoto emva kokusela kakhulu. Ngaba ubanjiwe emva kokutshekishwa ngotywala okanye ufumana isohlwayo okanye isamani? Ke kububulumko ukuzibonelela ngegqwetha elichazayo. Emva kwayo yonke loo nto, ukuqhuba uphantsi kwempembelelo yotywala kuya kohlwaywa ngezohlwayo eziqatha ezinokuthi zihambe ukuya kwiinyanga ezintathu ejele okanye isohlwayo se-EUR 8,300 kwaye unokufumana nokumiswa kokuqhuba. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ngexesha lokuxoxwa okanye ngexesha lotywala jonga imithetho iyaphulwa ngamapolisa kunye nabasemagunyeni kwezomthetho. Isenokuba yimeko yokuba uvavanyo lotywala aluniki bungqina luqinisekileyo kwaye lunokusombulula ukungabuphelisi. Ngamanye amaxesha, isohlwayo okanye ukumiswa kokuqhuba akusebenzi. Law & More inabameli abaziingcali kwicandelo lezomthetho wolwaphulo-mthetho abakonwabileyo ukukunika iingcebiso okanye bakuncede kwinkqubo. Unokufumana ulwazi oluthe kratya malunga nokuziphatha okuyingozi kwi-traffic kunye nokuqhuba unxila kuthi iwebhusayithi yezithuthi.
Xa usiya eNetherlands, ugqitha amasiko. Ngeli xesha, awuvunyelwe ukuba uphathe iimpahla ezithintelwe. Ukuba ayenzeki loo nto okanye ukuba abasemagunyeni bafumana iimpahla ezingavumelekanga ngenxa yokungazi okanye ukungakhathaleli, kuya kubakho ulwaphulo-mthetho. Ilizwe lemvelaphi okanye ilizwe lakho alinampembelelo kulo mbandela. Esona seso sohlwayo sinokubakho kwaye sisiso esiqhelekileyo. Ukuba ufumene isohlwayo kwaye awuvumi, unokukuphikisa oku kwiNkonzo yamaTyala kaRhulumente yaseDatshi kwisithuba seeveki ezimbini. Ukuba uhlawula kwangoko, uhlawula ityala kwakhona. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba uqale ubonane negqwetha ngemeko yakho. Iqela lethu lamagqwetha lifumana ingcali yolwazi kwaye linokukucebisa kwaye likukhokele nakweyiphi na inkqubo. Ngaba ufuna uncedo okanye unayo eminye imibuzo? Nceda unxibelelane Law & More. Unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nemingcipheko kunye nemiphumo yokuthatha iimpahla ezingavumelekanga kwibhlog yethu: 'Amasiko amaDatshi'.
Umthetho oManyeneyo woLwaphulo-mthetho
Kule mihla, iinkampani zijamelana nomthetho wolwaphulo-mthetho. Umzekelo, kunokwenzeka ukuba inkampani yakho ikrokrelwe ukwenza ingeniso engalunganga yerhafu okanye ukwaphula imigaqo yokusingqongileyo. Imicimbi enjalo inzima kwaye ingakhokelela kwiziphumo ezifikelela kude, kokubini kuwe nakumashishini. Kolu hlobo lwemeko, kubalulekile ukuba udibane negqwetha ngokukhawuleza. Igqwetha elichazayo alizukubonisa imisebenzi yakho, njengoxanduva lokubonelela ngolwazi kwabasemagunyeni beerhafu, kodwa liya kuqinisekisa ukuba amalungelo onawo (njengenkampani) anje, njengelungelo lokuhlala uthe cwaka, awaphulwa. Ngaba ujongene nomthetho wolwaphulo-mthetho njengenkampani kwaye ufuna ingcebiso okanye uncedo lwezomthetho kwimeko yakho? Ungathembela Law & More. Iingcali zethu zinendlela ephucukileyo kwaye ziyayazi indlela ezinokukunceda ngakumbi.
Phantsi kweemeko ezithile unokuziva unenkani, umzekelo xa uthenga impahla kwi-Intanethi, uhlawule imali eninzi ngayo kwaye akazange ayifumane, ngaphandle kweempawu zomthetho zetyala lolwaphulo-mthetho. Ukuze ukwazi ukuba isityhutyha lulwaphulo-mthetho ngokwasemthethweni, kufuneka kubekho ubuxoki okanye ubuxoki obusetyenziswa ngumthengisi ukuthengisa into. Is Scam sichazwa ngokusemthethweni njengokuhambisa omnye umntu ukuhambisa imali kunye neempahla, ngaphandle kwenjongo yokuzisa nantoni na ngembuyekezo. Ngaba unomdla wokuba singenza ntoni? Nxibelelana nabameli bethu. Law & MoreAbameli banendlela yobuqu kwaye banako ukuvavanya imeko yakho kunye nokhetho lwakho.
Sitsalele umnxeba kule nombolo +31 (0) 40 369 06 80 ye-imeyile ye-imeyile nge-imeyile: